महराविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएलगत्तै गृहमन्त्रीले नै दिए प्रहरीलाई यस्तो कडा निर्देशन, अब के होला ? — Sanchar Kendra
महराविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएलगत्तै गृहमन्त्रीले नै दिए प्रहरीलाई यस्तो कडा निर्देशन, अब के होला ?
काठमाडौँ । रोशनी शाहीमाथिको ब’ला’त्का’र प्र’क’रण’मा सभामुखबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर मह’रा’वि’रु’द्ध ब’ला’त्का’र प्रयासको मुद्दा दर्ता भएको छ । रोशनी शाहीले महरावि’रु’द्ध नयाँ बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा जबरजस्ती क’र’णी उद्योगमा मु’द्दा दर्ता गरेकी हुन् । गृहमन्त्रालयको स्रोत अनुसार पीडित महिला रोशनी शाहीले शुक्रबार कि’टा’नी जा’हे’री दिएकी हुन् । गत आइतबार राति महराले आफूलाई ब’ला’त्का’र गरेको भन्दै मिडियामा आएकी शाहीले भोलिपल्ट भने त्यस्तो केही नभएको बताएकी थिइन् । उनले महरा आफ्नो कोठामै नआएको दाबी समेत गरेकी थिइन् । कृष्णबहादुर महराद्वारा रोशनी शाहीको कोठामा गै रक्सी खाएर कु’ट’पि’ट तथा ब’ला’त्का’र भएको आरोप लागेको छैटौं दिनमा बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दर्ता भएको हो । रोशनी शाही र महराको केस पनि उनका श्रीमान चित्रजंग शाहीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए ।
रोशनी शाहीले ब’ला’त्का’र गरेको आरोप लगाए हाम्रो कुरामा अन्र्तवार्ता दिएको पछिल्लोे दिन नेकपाले महरालाई राजीनामा गर्न आदेश दिएपछि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको केही घन्टा पछि रोशनी शाहीले महरा बाबु समान भएको नागरिक खवरमा अन्र्तवार्ता दिएकी थिइन् । रोशनीले अघिल्लो दिन ब’ला’त्का’र गरेको र पछिल्लो दिन बाबुसमान भएको प्रतिक्रिया दिएपछि सर्वत्र अनुसन्धान प्रभावित हुने जनाईको थियो । कानुनविदहरुको पनि महरा प्रकरणमाथि धारणा बाँझिएको थियो ।’महरालाई चोख्याउनका लागि रोशनी शाहीलाई दवावमा राखिएको एकथरिको विश्लेषण थियो । महरा माथिको ब’ला’त्कारको आरोप पछि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महरा प्र’क’र’ण’मा ढुक्कले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बिहीबार नै रोशनीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मेडिकल परीक्षण समेत गरिएको छ । महराले रोशनीको घरमा नगएको दावी गरेपनि रोशनीको घरमा गएको सिसि टिभी फुटेज, रोशनीसँग महराको फेसवुक म्यासेन्जर सम्वाद आदिले पुष्टि भएको देखिन्छ । महरामाथि प्रहरीको अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार हुने सम्भावना किन पनि बढि छ भने महरालाई सांसद पदबाट राजीनामा गराउने खेल नेकपाबाटै सुरु भइसकेको छ ।
यतिबेला सर्वत्र चर्चाको पात्र बनेका छन् कृष्णबहादुर महरा । उनी विरुद्ध रोशनी शाहीले लगाएको आरोप र सोही आरोपलाई शाहीले नै गरेको खण्डन चर्चाको विषय छ । यही घटनाले महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । यो घटनालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीमासँगै युद्ध लडेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले महरालाई सम्बोधन गर्दै पुराना तस्वीर राखेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो चिठ्ठी लेखेका छन् ।
यहींनेर हामी चुक्यौं! मैले यो एउटा शिखर चढेपछि अर्को शिखर चढ्न नयाँ बाटो खोजौं भनेको थिएँ। तर मैले साथीहरूलाई मनाउन सकिनँ! साथीहरू पुरानै शिखरमा बसिराख्न खोज्नुभयो तर वैज्ञानिक रूपमा त्यो सम्भव थिएन! त्यसैले अब क्रमश: साथीहरू पुरानो शिखरबाट खुर्मुरिइरहनुभएको छ! तपाईं ( महराजी ) को पछिल्लो प्रकरण त्यसैको एउटा नमूना हो ! ३. यो प्रकरणमा तपाईं दोषी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न म किटेर भन्न सक्दिनँ! सत्य कि तपाईंलाई थाहा छ कि सम्बन्धित महिलालाई थाहा छ! तर अहिलेसम्म बाहिर आएका कुराबाट शंकाको सुई तपाईंतिर सोझिन्छ! हामीले SLC मा पुष्कर शमशेरको “परिबन्द” कथा पढ्थ्यौं! त्यहाँ परिबन्दले निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ!
यौ’न मामिलामा महान् व्यक्तित्वहरू पनि कसरी चुक्छन् भन्नेवारे स्कूलमा पढ्दा गुरूले सुनाएको यो संस्कृत श्लोक सम्झिन्छु: ‘विश्वामित्र परासर प्रभृत्तयो वाताम्बु पर्णाशना। तेपिस्त्री मुखपंकजं सुललितम् दृष्ट्वैव मोहम् गता।। साल्यान्नम् सघृतम् पयोदधियुतम् भुन्जन्ति ये मानबा:। तस्याम् इन्द्रीय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्।।’ तर प्राकृतिक कारण र ऐतिहासिक उदाहरण दिएर सामाजिक दायित्व बहन गर्ने मान्छेले यौन उच्छृंखलता गर्न मिल्दैन!अझै गम्भीर कुरा त महिलालाई उपभोग्या वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्नु र सत्ताशक्ति र धनको वलमा महिलाको अस्मिता हरण र यौनशोषण गर्नु कानूनी दृष्टिले समेत दण्डनीय हुन्छ!
हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा अधिकांश रूपमा महिला नै पीड़ित हुने भए पनि कहिलेकाहिं पुरूष पनि उत्पीडन वा प्रतिशोध/षड्यन्त्रको जालमा पर्नसक्छ। तपाईंको हकमा पनि अन्यथा भएको हुनसक्छ। त्यसनिम्ति पनि तपाईंले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर कानून बमोजिम न्यायको निरूपण गर्न र आफुलाई निर्दोष सावित गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्नुपर्छ र त्यसलाई सघाउनुपर्छ! त्यसले तपाईंको प्रतिष्ठा घटाउने हैन बढाउनेछ! यदि जानेर वा नजानेर गल्ती वा अपराध भएको हो भने त्यसलाई खुला रूपले स्वीकार्नु र प्रायश्चित्त गर्नु नै तपाईं स्वयम्, क्रान्तिकारी आन्दोलन र देशको हितमा हुनेछ।भनिन्छ- गल्ती गर्नु अपराध हैन; गल्ती नसच्याउनु अपराध हो!